Tilmaamaha Xalaasha ah ee Lankaran - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Lankaran, Lenkeran, ama Lenkoran wuxuu ku yaal Azerbaijan's Talysh Region.
Dadka ku nool magaalada Lankaran waa 48,400. Tirada dadka degmadu waxay ahayd 196,156 illaa Janawari 2004. Kuwaas waxaa ka mid ah, 58,937 qof oo ku nool magaalooyinka, 20,284 degsiimooyinka iyo 116,935 oo ku yaal tuulooyinka. Cufnaanta tirada dadka 127.5 qofkiiba 1 km2 waxay 40% ka badan tahay heerka jamhuuriyadda. Qiyaasta dumarka iyo ragga 100kii muwaadin waa 49/51. Tirada dadku waxay ku kordheysaa koritaanka dabiiciga ah. Sanadihii la soo dhaafey, tirada dadka waxaa ku kordhey 9.8 kun qof ama 5.3%. Gobolku wuxuu sifiican uhelay ilaha shaqada. Tirada dadka shaqeeya waa 82,339. Waa 73.3% qaybaha dhaqaalaha firfircoon ee dadweynaha. 3.2% dadka shaqeeya waxay mashquul ku yihiin laamaha warshadaha iyo dhismaha, 73.8% beeraha, iyo 23% qaybaha kala duwan ee wax soo saarka iyo adeegyada. Marka laga reebo dadka deegaanka, 519 qaxooti ah, iyo barakacayaal. Kalabar dadka ku nool Lankaran waxay ka kooban yihiin qowmiyadda Talish.
Lankaran waa mid ka mid ah degsiimooyinka ugu faca weyn Azerbaijan. Xaqiiqooyinka ay xaqiijiyeen khubarada qadiimiga ahi waxay sheegaysaa in aaggaas lagu noolaa xilligii Maarta. Sababtoo ah isku xirnaanta udhaxeysa Bariga iyo Galbeedka sida wadada xariirta, Lankaran wuxuu sii waday inuu ubocdo halka ugu weyn ee laga istaago marinnada gawaarida. Sanadkii 1742, Talish Khanate wuxuu caasimadiisa u wareejiyay Lankaran. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, dadka ku nool Lankaran oo dhan waxay ku lug lahaayeen dhaqashada xoolaha, beeraha, beero dhaqashada, iyo dhaqashada dhirta. Xirfadaha sida bir-tolayda, nashqadeeyayaasha, dhoobada, iyo tolidda ayaa ah dhaqammo dhaqameed muhiim u ah Lankaran oo dhan. Birtume, naxaas-tumaal, dhoobado iyo ganacsiyo kale ayaa si ballaadhan ugu faafay Lankaran. Tan iyo markii Khanate ay aasaaseen xarunteeda Lankaran, waxaa si weyn kor ugu kacay xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Iran, Turkey, Russia, China, India, Pakistan, iyo Central Asia. Markii la saxiixay "Gulustan Treaty" ee 1829 ee u dhexeeya Ruushka iyo Beershiya, Waqooyiga Azerbaijan waxaa qabsaday Ruushka. Qabsashadii Ruushka, dadku waxay hormuud ka ahaayeen horumarinta dhowr warshadood oo cusub oo ku yaal Lankaran sida viniculture, dhoobada, iyo sameynta leben, waxayna gacan ka geysteen abuurista xiriir ganacsi oo u dhexeeya Lankaran iyo Ruushka. Isweydaarsigan, Lankran wuxuu xoojiyay xididdadiisa dhaqameed, iyo saldhigyadeeda sayniska, waxbarashada, caafimaadka, iyo warshadaha.
Lankaran waxay ku jirtaa qayb aad u qurux badan oo ka tirsan Azerbaijan. Waxay ku taal Koofur-bari dalka. Lankaran waxay ku jirtaa mid ka mid ah shanta gobol ee juquraafi ahaan dabiiciga ah ee Azerbaijan. Bedka gobolka Lankaran wuxuu xuduud la leeyahay dhulka hoose ee Kur-Araz ee woqooyiga iyo Badda Caspian ee Koonfurta-Bari. Waxay ku wareegsan tahay daaraha Astara, Masalli iyo Lerik. Sida ku xusan gargaarka, dhulku wuxuu ka kooban yahay badiyaa iyo qeyb buuro ah wuxuuna ku cidhiidhyaa Koonfurta. Barta ugu sareysa Lankaran waa 200 mitir oo buuraha ah halka ugu hooseysa ee Lankaran ay 28 mitir ka hooseyso heerka badda ee xeebta Caspian. Masaafada udhaxeysa Lankaran iyo Baku waa 268 km.
Winter - Jiilaalku waa qabow, laakiin ma jiro roob badan inta u dhexeysa Disembar ilaa Maarso.
Spring - Gu'ga Lankaran waa mid qurux badan oo dadka u oggolaanaya inay socod dheer oo dayacan ku qaataan xeebta.
Summer - Xilliga xagaaga ee Lankaran waa kuleyl, laakiin aad buu u qurux badan yahay subixii iyo fiidkii.
Fall - Dayrta ayaa ah mid aad u kulul maalintii, laakiin habeenkii xoogaa way qabowdaa.
Ilaa iyo inta ay garoonku ka hawlgalayo markale, midka ugu xawaaraha badan inta udhaxeysa Baku iyo Lankaran waa tagsi - waxay qaadataa qiyaastii 3.5 saacadood. Ka tagida Baku ilaa Lankaran waxay ku kacaysaa 10 manat halkii kursi (4 qof). “Lavangi” Avtovagzal (Saldhigga Gawaarida) wuxuu u adeegaa gaadiidka u socda / ka tagaya Baku ee tagaasida, basaska, iyo marshrutka. Lankaran Avtovagzal # waa 0171-45928.
Xarunta tareenka waxay ku taal bartamaha magaalada. Waxaa jira adeeg tareen koronto iyo habeenkii oo mara inta udhaxeysa Baku iyo Lankaran. Tikidka tareenka korontada ku shaqeeya wuxuu ku kacayaa qiyaastii 2.5 manat wuxuuna ka tagayaa Baku 08:00 wuxuuna ku laabanayaa Baku 17:00. Tareenka habeenkii wuxuu udhaxeeyaa 3.20-5.40 manat wuxuuna katagayaa Baku 23:30 wuxuuna kusoo noqonayaa 21:00.
Bas ama marshrutka
Basaska iyo marshrutkas waxay ka baxaan Baku qeybta 20-ka Janaayo saacad kasta saacad kasta oo ka bilaabanta 8. Basaska ayaa ah ikhtiyaar raaxo leh, laakiin waxay ka dheereeyaan taksiyada ama marshrutkas. Safarka Baku ilaa Lankaran wuxuu qaadan doonaa 5-6 saac baska dhexdiisa wuxuuna ku kacayaa 5 manat. Basasku waxay ka baxaan qiyaastii saacad kasta "Lavangi" Avtovaqzal oo ka baxsan bartamaha magaalada. Marshrutkas ama gawaadhida yar yar ayaa inta badan baxa saacad kasta oo ka bilaabata 8. Waxay qaadataa 4-5 saacadood si Lankaran looga tago Baku. Qiimuhu waa 5 manat wuxuuna ka baxayaa "Lavangi" Avtovaqzal oo ka baxsan bartamaha magaalada.
Madaarka Baku-Baku-Lankaran: 17:00
Madaarka Caalamiga ah ee Lankaran (oo ku taal qaybta bari ee magaalada). Sababtoo ah waxay ku dhowdahay xadka Iiraan, waa ikhtiyaar wanaagsan in laga soo galo Iran iyada oo loo marayo Astara ama Baikal halkan.
Tagaasida ayaa aad ugu habboon haddaad ogtahay halka aad rabto inaad ka gasho magaalada gudaheeda. Cinwaanadu waa kuwo aan waxtar lahayn, markaa way fiicnaan laheyd inaad heshid taariikhi aad taqaanid oo aad ku hagto tagsiilaha halkaas. Waxay ku kacaysaa 1 manat halkii safar oo taksi ah.
Wadooyinka basaska ee Magaalada gudaheeda
Dhammaan basaska magaalada gudaheeda ka taga oo ka soo noqda Bazaar Weyn ee magaalada Lankaran.
1 Dairavi Circle Route A: Big Bazaar, Tofig Ismayilov Street, Azriba district, Diagnostic Center, Lavangi Bus Station, Shahidlar Khiyabani Sh / Kh, Little Bazaar Mosque, Big Bazaar
2 Dairavi Circle Route B: Big Bazaar, Little Bazaar Mosque, Shahidlar Khiyabani Sh / Kh, Lavangi Bus Station, Tofig Ismayilov Street, Big Bazaar
3 iyo 4 Wadada Digah-Shilavar: Big Bazaar, School # 5, Shilavar, Digah, Hanifa Abdullayev Street (Turkish Lyceum), Sattarkhan Street, Koroglu Street (agagaarka Hotel Gala), Big Bazaar.
5 Wadada Lankaran-Microrayon A: Big Bazaar, H. Aslanov Street (agagaarka Hotel Gala, ka hor Bakhaarka Waaxda), Heydar Aliyev Street, Shahidlar Khiyabani Sh / Kh, Tofig Ismayilov, Ali Mammadov Street, 2nd Microrayon Wedding Palace ( Shadliq Evi), Z. Aliyeva Street, Heydar Aliyev Street, Mir Mustafakhan Street, Big Bazaar
6 Wadada Lankaran-Microrayon B: Big Bazaar, H. Aslanov Street, Heydar Aliyev Street, Z. Aliyeva, Ali Mammadov Street, 2nd Microrayon Wedding Palace (Shadliq Evi), Hanifa Abdullayev Street, Heydar Aliyev Street, Shahidlar Khiyabani Sh / Kh Circle , Heydar Aliyev Street, Mir Mustafakhan Street, Big Bazaar
In kasta oo ay jiraan goobo dalxiis oo kaladuwan oo ku yaal Lankaran, Ingiriisiga si ballaaran looguma hadlo sidaa darteed waxaa caqli gal ah inaad keento buug weedho Azeri ah ama aad ku cadaydo Ruushkaaga / Azeri / Turki intaadan imaan. Talish sidoo kale si ballaaran ayaa looga hadlaa Lankaran.
Lahjada Lankaran way ka duwan tahay tan caadiga ah ee Azeri. Badanaa, ereyada Farsi iyo Talish waxay ku dhexjiraan afafka dadka deegaanka.
Magaalada Lankaran waxaa ku yaal matxafyo taariikhi ah oo taariikhi ah oo labaduba dhaqan ahaan macluumaad ka hela sidoo kalena taariikh ahaan muhiim u ah.
Waxaa jira guri-madxaf xusuus u ah General-guud Hazi Aslanov oo ku yaal gobolka Lenkaran oo la dhisay 1969. Waxa kale oo jira taallo laga dhisay bartamaha magaalada General Aslanov sanadkii 1983.
Waxaa jira matxaf caan ah oo maxalli ah oo ay ku jiraan xusuusta Mir Akhmed ee Talysh Khan gurigiisii ​​hore ee la dhisay 1913.
Meelaha taariikhiga ah
Xabsi Hore iyo Iftiin. Waxaa jira xabsi aad u caan ah oo taariikhi ah oo ku yaal Lankaran halkaas oo Joseph Stalin lagu hayay in muddo ah. Kadib M. Rasulzadeh, aasaasihii Jamhuuriyadda Azerbaijan Democratic, wuxuu Stalin ka caawiyay inuu ku baxsado marin dhuumasho qarsoodi ah oo loo maro Mayak Lighthouse caan ah (shaqsi udub dhexaad u ah iyo ilaha sharaf ee Lankaran dhexdeeda) ka dibna loo maro Badda Caspian.
Qabriga Seyid Khalifa. Qabrigii 19-aad ee Seyid Khalifa wuxuu ku yaal tuulada Jil. Halkan waxaa ku yaal dhagxaan qabri ah oo dhererkoodu gaadhayo 1m 40cm. Dhagxaanta xabaasha waxaa lagu barbardhigay xardhidda iyo raad-raac. Xabaasha dhexdeeda waxaa lagu arkayaa shaybaarada ay leeyihiin diinta Islaamka iyo kuwa dabka caabuda. Qabriga Seyid Khalifa waxaa ilaalinaya dawlad goboleed taallo taariikhi ah.
Guriga Isa Khan. Tan waxaa la dhisay horaantii qarnigii 20aad qaabdhismeedkuna wuxuu leeyahay qaab dhismeed caan ah.
Qubeyska Dadweynaha (Hamamlar)
Khaji Mirze iyo Khaji Gurban qubeyska (hamamlar) waxay ku yaalliin agagaarka baarka yar. Qubeyska yurubiyanka ee qaabeysan ayaa ku yaal Lankaran.
Waxa ku yaal laba masaajid oo waaweyn magaalada Lankaran. Mid baajaajta yar iyo midda weyn ee baarka.
Waxay ku yaalliin degitaanka Sutamurdov ee ka baxsan Lankaran, waxaa ku yaal masaajid duug ah oo la dhisay qarnigii 19aad laguna magacaabay "Khajy Novruzali".
Waxay ku taal deegaanka Shikhakeren waxaa ku yaal masaajid la dhisay qarnigii 19aad.
Waxay ku taal deegaanka Jil, waxaa ku yaal masaajid la dhisay 1906.
Tiyaatarka iyo shineemo. Waxaa ku yaal Tiyaatarka Riwaayadda Bartamaha magaalada. Waxaa jira riwaayado la qorsheeyay ama dhacdooyin kale oo ka dhaca tiyaatarka.
Alaabada ay ku ciyaaraan Azeri (aroosyada). Khibrad dhaqameed waa in la arkaa waa xaflad aroos oo Azeri ah oo lagu qabto mid ka mid ah fara ku tiriska ah ee Shadlig Evi (Daaraha Aroosyada). Aroosyada, cuntada macaan iyo cabitaanada waa badan yihiin, muusikada qaranka iyo qoob-ka-ciyaarka waa la soo bandhigayaa, xafladaha waaweyni waa kuwa aan kala joogsi lahayn, kaamirada fiidiyahana marwalba way socotaa. Aroosyadu waa martiqaad keliya, laakiin weydii qof kasta oo maxalliga ah waxyaabaha ku saabsan 'alaabta lagu ciyaaro' ee soo socda waana inaad ku martiqaaddaa mid. Azeris ayaa caan ku ah martigelintooda waxaana lagugu soo dhaweyn doonaa gacmo furan.
Qubeys weyn oo Isti Su ah
Sanstorium Istisu. Bariga magaalada Lankaran waa ilo biyo kulul (istisu) sanatorium oo ku taal aag dabiici ah oo leh geedo alwaax iyo alwaax bir ah leh iyo durdur yar.
Seeraha Qaranka ee Hirkan. Bedka baarkani qaran waa 15,000 hektar. Waxay ku leedahay 150 nooc oo geedo ah iyo geedo aagga jardiinada oo 36 ka mid ah waa kuwo aad u caafimaad qaba. Faunada ku jirta beerta qaranku maaha mid taajir ah, laakiin qofku halkaas ayuu kula kulmi karaa noocyo naadir ah oo dhif ah. Waxaan kula kulmi karnaa xayawaanka, xayawaanka duurjoogta ah, kudka barta, dawacooyinka, iyo shabeellada Aasiya ee baarkinka. Sida shimbiraha, alwaaxa, Hilqyada Hirkan, iyo shimbirro shimbir ah ayaa la ogaan karaa. Naasaha Hirkan halkan ayey ku badan yihiin. Kaymaha ku jira dhulka beerta ayaa dhererkoodu yahay laba iyo saddex dabaq. Inta badan waxaa ku yaal geedkii caleenta xabadka, birta-birta, Caucasus persimmon, lowska beenta ah, iyo geedaha qudhaca ee Lankaran qaybta hoose ee beerta. Geedka alwaax-birta ah (demir agaj) wuxuu gaar u yahay cufnaantiisa inuu ku dhex dego biyaha. Waxay u dhowdahay inaysan cayayaanka burburin waxayna ku dhalatay kaliya dhul ciriiri ah oo ku yaal buuraha Talish ee ku xeeran Lankaran.
Xuduuda Iran & ilo biyo kulul. Kaliya galbeedka tuulada Artupa ee Astara waa qaybta koonfureed ee Xadiiqadda Qaranka ee Hirkan. Wadada loo maro baarkinka waxay maraysaa xadka Iiraan halkaasoo silsilado dhaadheer oo silig ah iyo biriijka birta ah ee Iiraan laga ilaaliyo ay si muuqata uga muuqdaan. Waardiyaha ayaa mararka qaar dib ugu laaban doona gawking dalxiisayaasha. Dhamaadka wadada waa ilo dabiici ah oo kulul oo ku darsama webiga. Halkan waxaad dhexdeeda ku dhex quusin kartaa ilo biyo kulul iyo webiga qabow.
Website Bulag (Waxay ku taal meel ka baxsan Lankaran wadada weyn ee aada Astara dhanka kaladuwanaanta quruxda badan ee buuraha ee galbeedka (ka hor Saldhigga Korantada).). Goobtani waxay ka kooban tahay il biyood ah oo had iyo jeer u gubaya sidii oo ay ahaayeen olol gaas shidan.
xeebaha ku. Koonfurta magaalada, xeebuhu way nadiifsan yihiin oo waa go'doon yihiin. Waxaa jira marin xeeb oo u dhow aagga Kanarmesha halkaas oo ay ku yaalliin makhaayado qaar.
Khazar (Caspian) Lankaran Kubadda Cagta. Waxaa ku yaalo garoon kubada cagta ah oo ka baxsan bartamaha magaalada oo lagu ciyaaro kubada cagta. Milkiilaha kooxda waa maalqabeen Lankaran ah. Kooxdu waa horyaalkii qaran ee 2007.
Xeydar Aliyev Park. Bartamaha Magaalada waa baarkin baaxad leh oo dadku isugu yimaadaan. Waa meel aad u fiican oo dadku daawadaan halkaan waxaad kaloo ku arki kartaa madxaf, taallooyin, iyo ilo biyo leh nalal/muusiko la socda. Waxaa socda qorshayaal lagu ballaarinayo beerta ilaa badda.
Xarunta Jirdhiska Jir ahaaneed ee Zirva, 80, Nizami Street. Kani waa Xarun Caafimaad oo cusub oo ku taal meel 10 daqiiqo u jirta Xarunta Magaalada. Xaruntani waxay leedahay qolka duugista, sauna, qubeyska uumiga, aagga kor u qaadista culeyska, kubbadda cagta ee yar yar, feerka, fanka legdinta, dabaasha, dukaanka tima -jarka, iyo aagga madadaalada.
Harooyinka Xanbulan / Khanbulan (Xanbulan su anbarı) (Haradaani waxay ku taal koonfur-bari magaalada Lankaran.) Waa keyd kaymo leh oo ku yaal jiidaha hoose, taas oo cajaa’ib u leh qado dalxiis iyo tamashleyn dabiici ah oo nasasho leh.
Warshad Shaah Aurora. Agagaarka Harada Xanbulan, dalxiisayaashu waxay aadi karaan mid ka mid ah warshadaha shaaha ee caanka ah ee Lankaran oo ay ku baaraan shaaha sida weyn looga yaqaan beerta ubaxeed ee Warshaddii Shaaha Aurora. Warshadan, dadku sidoo kale way dalxiis tagi karaan waxayna arki karaan habka shaaha loo sameeyo.
Qasriga Ballabur. Bariga magaalada Lankaran oo u dhow buur yar oo ku taal tuulada Ballabur waa meel la sheegay inay tahay goobtii Qadiimiga Bazz. Waxay ahayd halkaan, halkaasoo madaxa Khuramid, Babek, uu ka difaacay qalcaddii ka soo duushay duullaanka Carabta. Ka dib dilkii Babek ee gacanta Carabta, dadkii qabsaday waxay dumiyeen qalcaddii, laakiin haraagii qalcaddii wali waa la arki karaa.
Kaydka Qaranka ee Gizil Agaj. Bedka keydka Gobolka waa 88,360 hektar. Natiijada cilmi baarista sayniska ee Gobolkaan 23 nooc oo xayawaanno ah, qiyaastii 270 nooc oo shimbiro ah, 12 nooc oo xamaarato ah iyo 47 nooc oo kalluun ah ayaa la arkay. Sannad kasta, shimbiro badan ayaa yimaada Gizilagaj State Reservation si ay buul uga sameystaan ​​waddamada Bariga sida hurdiga huruudda iyo duurjoogta, flamingo, shinbiraha duurjoogta ah ee dhinaceeda ah flamingo, shinbiraha webiga, iyo doofaarrada ayaa ku nool Reserve-ka Gobolka. Kalluunka sida sazan, herring, seal, omul, mullet mullet, pike, salmon iyo xayawaannada sida doofaarka, xayawaanka, dawacooyinka, dawacooyinka, badgers, beavers digaaga duurjoogta ah, iyo dabagaalaha biyaha ayaa laga heli karaa keydkan.
Safarada iyo dalxiisyada Lankaran
Ku soco tacabur sida booqashada "borsooyinka" kuwaas oo ah meelo muqaddas ah oo qarsoodi ah oo ku baahsan gobolka koonfurta. Tag http://www.lankaran.org wixii faahfaahin dheeraad ah.
Imaada fiidkii, ka hubi hudheel
Tag makhaayad maxalli ah iskuna day digaagga Lavangi oo leh rooti (bariis)
Ka cab shaaha Lankaran meesha u dhow chay hana (shaaha shaaha) oo kula sheekayso / la ciyaar domino-ga dadka deegaanka
Iibso rootiga immika la dubay ee quraacda ah kuna cun subag iyo malab / jiis
Ku dhex lugee bacadlaha oo fiiri farsamada gacanta ee kala duwan
Iibso qadada qadada safarka si aad ugu safarto Istisu (hubi inaad sidoo kale keento tuwaal)
Baska u raaca Istisu marka laga yimaado baarka weyn oo ka deg Sanitorium (joogsigii ugu dambeeyay; 0.20 manat)
Ku fuulo buuraha Talish ee ka dambeeya Sanitorium-ka oo dusha sare ku ciyaar dalxiis
Hoos ugu dhaadhac Sanitorium oo waxaad dhexmartaa qubeyska xagaaga xagaaga (weydii qol weyn oo gaar ah, 1 manat / qof)
Ku noqo magaalada tagsi ahaan 2 manat.
Ka cuno casho makhaayad maxalli ah iskuna day cuntooyinka kala duwan ee hilibka BBQ ama kalluunka (kabab)
Ku soco magaalada dhexdeeda si aad u aragto meelaha xiisaha leh
Isku day waxoogaa gutab ah (canjeel fidsan) iyo kokteyl cusbooneysiiya (sida milkshake) cunto fudud
Ku soco socod cusboonaysiin xeebta agteeda Badda Caspian
Ka ambo bax meesha aad ku socoto
Bazaar weyn - Ku dhex lugee suuqyada banaanka iyo gudaha ee isku xiran si aad uga dukaameysato wax kasta iyo wax kasta. Sahaminta iyo ogaanshaha waa madadaalo badhkeed!
Zanbil - Zanbil waa dambiisha la tolay oo ku kala cabbir duwan. Dambiilo waaweyn ayaa loo adeegsadaa dukaamada bazar. Dambiilo yaryar ayaa mararka qaarkood loo isticmaali karaa boorsooyin.
Sharaabaad Talish Knitted (Tohuma Jorab) - Haweenka Talish dhaqan ahaan waxay xidhaan dhar midab leh (casaan ayaa ugu cadcad) iyo Jorab sharaabaadyo tolmo leh ayaa la xidhaa xilliga qabow. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 1-6 manat iyadoo kuxiran dhererka sharaabaadyada.
Shaah Lankaran (Chay) - Lankaran ayaa caan ku ah dhamaan Azerbaijan soo saarista shaaha ugu fiican wadanka. Shaaha Lankaran waa hadiyad caan ah oo ay iibsadaan dadka soo booqda Baku iyo gobollada kale. Shaaha waxaa lagu iibiyaa 100g iyo 0.5kg jawaano waxaana qiimahoodu u dhexeeyaa 8-16 manat halkii kiilo.
Kalosh - Kalosh waa kabo caag ah oo ay isticmaalaan dadka reer Talish xilliyada roobka.
Bangiga Caalamiga ah ee Azerbaijan
18 Sh. Wadada Akhundov
Wadada H. Aslanov (Bakhaarka weyn ee Central)
Digaagga Lavangi - Markii aad aadeyso makhaayadaha ama guryaha ku yaal Lankaran, waxaa suuragal ah in lagu siiyo saxankan. Cuntadan waxaa lagu kariyaa lowska gaarka ah iyo basasha gudaha ku jirta. Waxa kale oo aad heli kartaa Kalluunka (Balig) Lavangi.
Roodhida Tendir - Hindisada waa foornada dhoobada dhaqameed ee rootigaan gaarka ah lagu sameeyo. Roodhida rootida kulul ee jiiska leh iyo subagga waa daawo dhab ah. Digaagga Lavangi sidoo kale dhaqan ahaan waa lagu kariyaa hindisada.
Plov - Lankaran, waxaa ku yaal noocyo badan oo bariis ah oo loo yaqaan plov. Kuwaas waxaa ka mid ah dill plov, baradhada baradhada, kalluunka digirta, iyo kalluunka kalluunka.
Guutab - Gutab waa cajiin cufan, la shiilay oo gudaha ku jiraan. Ku tijaabi baradhada (kartov) ama hilibka caloosha (qarin) oo la buuxiyo oo hubi inaad ku rusheeysid uunsato badan oo udgoon leh dhadhankeeda aashitada udgoon.
cookies - Hubso inaad cuntid buskudyada 'Lankaran'. Iyagu waa kuwo caan ah oo caan ah, sidoo kale qadada ama qadada soo jireenka ah ee magaaladan.
Cunnooyinka kale - Lankaran waxay leedahay cunno badan oo dabiici ah sida feyhoa, quince, cumquat, rummaan, liin, liin macaan, iyo shaah. Haddii aad fursad u leedahay, hubi inaad isku daydo qaar ka mid ah cuntooyinkan gobolka ka socda.
Makhaayada Dalga. Kani waa makhaayada ugufiican Lankaran oo leh cunnooyin waawayn sida Balig (Kalluun) Lavangi iyo Entrikot (Lamb Chops). Hubso inaad weydiisato qiimayaasha kahor intaadan amrin inaad iska ilaaliso in lagaa qaado lacago badan.
Makhaayada Saaxil. Makhaayadani waxay ku taal koonfurta Heydar Aliyev Park oo u dhow biriijka birta iyo wabiga Lankaran.
Makhaayada Titanic. Kani waa makhaayad dhowaan la dhisay oo u qaabeysan sidii markab. Waxay ku taal duleedka magaalada dhinaca badda iyo Dhismaha Olimbikada. Ku raaxayso muuqaalka badda intaad halkan wax ku cunayso.
Makhaayada Uzbek. Makhaayadani waxay ku xigtaa maktabadda waxayna caan ku tahay dadka deegaanka. Ma jiraan wax calaamado ah, markaa weydii dadka deegaanka.
Istambuul Lahmacun (On Haydar Eliyev meydan terefi, oo u dhow Bangiga Beynexalq). Kani waa maqaayada ugu cusub Lankaran. Waxay leedahay qiimaha caadiga ah ee Turkiga ee qiimaha aan aad qaali u ahayn. 2-5 manat ..
Guryaha shaaha (Çay Xanalar)
Shaaha Lankaran - magaaladan oo leh beero waaweyn oo shaah - waxaa lagula talinayaa inay weheliso buskudyada kor ku xusan.
Meel fiican oo ay ragga ku cabi karaan shaah, ku ciyaaraan domino, oo ay ku xantaan xanta deegaanka ama ka hadlaan waxyaabaha ugu fiican ee lagu arko aagga. Tani waxay noqon kartaa waayo-aragnimo weyn haddii aad awood u leedahay luqadda Turkiga, Ruushka, ama Azerbaijani. Fadlan fiiri qoraalka dhaqameed ee kor ku xusan hoosta "baararka" hoosaadka.
Makhaayadaha ku yaal Lankaran runtii waa makhaayado yaryar. Haddii aad raadineyso qaxwo, tag hudheelka Gala ee magaalada.
Xagee dagan tahay Lankaran
Hotel Gala,, fax: + 994 171-502-84. Hoteelka Gala waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hudheel 4-xiddig leh wuxuuna bixiyaa deegaanno heer galbeed ah. Waxay leedahay shir, xarun ganacsi, adeegga dharka lagu dhaqdo, makhaayad, iyo xarumo baar. Barkad lagu dabaasho ayaa socota. Waxaa jira 56 qol. (hal 40 manat, double 50 manat, mataano 70 manat, iyo lux 120 manat) oo lagu daray cashuurta magaalada ee 1.10 manat ee dhismahan afarta ah. 40-120 manat / habeen.
Hotel Xazar,, fax: + 994 171 516-63. Hoteelka Xazar wuxuu ku raaxeeyaa meel xasilloon laakiin meel dhexe ah (oo ku xigta Tiyaatarka Masraxa) iyadoo la raacayo martida oo xasilloonida iyo helitaanka fudud ee magaalada mashquulka badan ee Lankaran. Waxay leedahay shir, kiosk internet, adeegga dharka lagu dhaqdo, makhaayad, iyo tas-hiilaad baararka. Fursadaha qolka waxay u dhexeeyaan hal illaa super lux iyo quraacda ayaa lagu daray qiimaha. 31-104 manat / habeen.
Dalga Hotel. Hotelka Dalga waa hudheelka ugu jaban magaalada Lankaran. Qolalka waxaa kuyaala telefishanka satalaytka oo hudheelkan waxaa ku yaal makhaayad. Huteelkan waxaa ku yaal 5 qol (dhaqaalaha 24 manat, caadi ah 36 manat, deluxe 50 manat).
Gizil Tac (Gizil Tajh). Kani waa hudheel 8 qol ah oo qol kasta leh telefishannada dayax gacmeedyada. Qolalka qaaliga ah waa inaad la wadaagtaa musqulaha, laakiin qolalka raaxada leh qolka waxaa ku yaal suuli. Hoteelkan waxaa ku yaal maqaaxi laga shaaheeyo laakiin ma jiro wax menu ah sidaa darteed dalxiisayaashu waa inay dalbadaan meesha laga soo galo. 30-50 manat / habeen.
Dhismaha Isboortiga ee Lankaran (koonfurta bartamaha magaalada). Waxay leedahay hoteello, isboorti, iyo xarumo shirar. US $ 45 / habeenkii.
Dalxiis Palmalife Lankaran, Sütəmurdov kəndi.
Waxaa jira xoogaa guryo ah magaalada Lankaran iyo Burjeli (oo ku xiga Hirkan Milli Park). Qiimaha qofkiiba waa qiyaastii 10 manat / night (oo ay ku jiraan cuntada).
Makhaayadaha internetka ayaa laga heli karaa hareeraha magaalada waxaana loo yaqaan "naadiyada internetka". Waxaa jira makhaayad internet oo fiican oo ku taal meel u dhow Xafiiska Boosta. Qiimaha sida caadiga ah waa 0.40 manat saacaddii.
Xafiiska Boostada Azerbaijan wuxuu ku yaal Xerada Xeydha Aliyev. Isugeynta warqad / shaambad caalami ah oo caadi ah waxay ku kacaysaa 0.80 manat.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Lankaran
Amniga Lankaran waa mid aad u sareeya wax walwal ahna laga qabo.
Xidho toosh (khaasatan xilliga deyrta-gu’ga) maadaama waddooyinka marwalba aan si fiican loo shidanayn oo koronto dhimistu caadi tahay.
Isbitaalka magaalada: 0171-479-32
Isbitaalka magaalada wuxuu ku yaal waqooyiga bartamaha magaalada.
Waa inaad ku hadashaa Azeri, Ruush, ama Turki si aad ugu gudbiso baahiyahaaga. Waxay noqon laheyd fikrad wanaagsan inaad xafido weedho muhiim ah kahor imaatinka Azerbaijan.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal Azerbaijan > Hagaha Xalaasha Lankaran